आहा गोल्डकपमा अल्टरसटको सहभागिता अनिश्चत: Nagarik News
Published on Wednesday, 17 December 2014 21:16
पोखराको आहा गोल्डकप फुटबलको मिति तय हुन नसक्दा बेलायती क्लबको सहभागिता अनिश्चित बनेको छ। सहारा युकेसँग आबद्ध बेलायती क्लब अल्टरसट एफसी १३औं आहा गोल्डकप खेल्न इच्छुक रहे पनि आयोजकले प्रतियोगिताको समयतालिका उपलब्ध गराउन नसकेपछि टोलीको सहभागिता अनिश्चित भएको हो।
पोखराको सहारा क्लबको सहयोगका लागि बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीले सहारा युके स्थापना गरेका थिए। सहारा युके फुटबल कार्यक्रम आदानप्रदान सम्झौतासहित यसै वर्ष अल्टरसटसँग आबद्ध भएको थियो। दुई क्लबबीचको सहमतिअनुसार नै अल्टरसट नेपाल आउने तयारीमा थियो। सहारा क्लबले आहा गोल्डकप आयोजना गर्ने भए पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को स्वीकृति प्राप्त भइनसकेको कारण मिति तय हुन सकेको छैन।
'आहा गोल्डकपको मिति तय नभएकाले अल्टरसटको सहभागिता अनिश्चितजस्तै भएको छ,' सहारा युकेका अध्यक्ष नवीन गुरुङले बेलायतबाट नागरिकसँग फोनमा भने, 'नेपाल आएर खेल्ने भनेर मात्र भएन। त्यसका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्योग। मिति तय नभएकाले प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका छैनौं।'
सहाराका अध्यक्ष वीरभद्र आचार्य माघ ६–१७ गते आहा गोल्डकप गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि एन्फाले स्वीकृति नदिएका कारण अन्योल परेको बताउँछन्।
'एन्फाले जिल्ला फुटबल संघ कास्की र हामीलाई आपसी सहमतिमा मिति तय गर्न भनेको थियो। त्यहीअनुरुप छलफल पनि भयो,' उनले भने, 'कास्कीले मनकामना केबुलकार गोल्डकप पुस २२ देखि माघ ३ सम्म गर्ने र हामीले केही पछिबाट आहा गोल्डकप गर्ने भन्ने सहमति भयो। तर, अझै केन्द्रले स्वीकृति दिएको छैन। त्यसले अन्योलता यथावत छ।'
सहारा फुटबल एकेडेमी चलाउन आर्थिक संकलन गर्नलाई हुने आहा गोल्डकपलाई एन्फाले छिट्टै स्वीकृति दिनेमा अध्यक्ष आचार्य आशावादी छन्। 'यसपटक अल्डरसट आउने तयारीमा थियो। तर मिति तय नहुँदा अब आउनेमा शंका बढेको छ,' उनले भने, 'अझै पनि ढिला गर्ने हो भने अन्य तयारीमा समेत असर पर्नेछ।'
एन्फा महासचिव धिरेन्द्र प्रधान भने स्वीकृति दिन अझै केही दिन लाग्ने बताउँछन्। 'राष्ट्रिय लिगको मिति तय गर्नेबित्तिकै मोसफलका प्रतियोगितालाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछौं,' उनले भने, 'त्यसका लागि अझै केही दिन लाग्न सक्छ। प्रायोजकसँग सहमति भएसँगै जिल्लाका प्रतियोगितालाई स्वीकृति दिन सहज हुन्छ। मोफसलका सबै प्रतियोगिता होस् भन्ने एन्फा चाहन्छ। '
एन्फाले मंसिर २२ बाट गर्ने तय भएको राष्ट्रिय लिग अझै हुन सकेको छैन।
उता सहाराका अध्यक्ष आचार्य भने आहा गोल्डकप आयोजनाका लागि छिटो वातावरण बनाइदिन एन्फालाई आग्रह गरेका छन्। 'द्वन्द्वका बेला होस् वा केन्द्रमा आन्तरिक विवादमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसक्दा पनि आहा गोल्डकप निर्वाध चल्यो र त्यसले देशभर फुटबलको माहौललाई जोगाउने काम गर्यौंा,' उनले भने, 'अहिले किन यति अलमल गरिएको हो। यसलाई एन्फाले छिटो समाधान गर्नुपर्छ।
अन्योलबीच यसअघि तय भएको मितिमा गर्न असम्भव भएकाले माघ २० देखि फागुन २ सम्म आहा गोल्डकप गर्ने तयारीमा क्लब रहेको आचार्यले बताए। उनले भने, 'तर त्यसका लागि पनि एन्फाको स्वीकृति दिनुपर्छ। अन्यथा अन्योल यथावत रहन्छ। '
अल्डरसट इङ्लिस फुटबल लिग संरचनामा पाँचौं श्रेणीको क्लब हो। २००८ देखि २०१२/१३ को सिजनसम्म लिग 'टु' खेलेको टोली २०१३ मा रेलिगेसन परेको थियो।
अहिले कन्फरेन्स प्रिमियर लिग खेलिरहेको अल्डरसटले चार तह बढुवा भएपछि मात्र प्रिमियर लिगको हैसियत पाउनेछ। अल्डरसटले खेल्न पाउने सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता एफए कप हो। क्लबको लन्डनको अल्डरसट सिटीमा ७ हजार ५ सय दर्शक क्षमताको आफ्नै रंगशाला छ।
नेपालको फुटबल विकासमा सहयोग गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित सहारा युके र अल्डरसटबीच सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार अल्डरसटले सञ्चालन गरिरहेको यु–८ र यु– ११ को एकेडेमीमा बेलायतमै बसोबास गर्ने नेपाली बालकहरूलाई प्रशिक्षण गराउने, नेपालका प्रतिभावान खेलाडीलाई क्लबमा व्यावसायिक अनुबन्धन दिने, नेपालको टिमलाई भ्रमण गराउने थियो।
आहा गोल्डकपमा नेपाल भ्रमण गर्दा अल्टरसटले नेपाली फुटबललाई केही सामग्री सहयोग गर्ने योजना पनि प्रभावित हुने गुरुङले सुनाए। 'भ्रमणक्रम फुटबल सामग्री हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो,' उनले भने, 'टोली नेपाल जाने विषय नै अनिश्चित भएपछि अन्य कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने भयो।'
एन्फाको भ्रष्टाचारमा अख्तियार किन मौन? Pahilo Post
Published on Wednesday, 17 December 2014 20:56
बिष्णुहरि घिमिरे -
मदिरा पिउने र नपिउने सामान्यतया लामो समय सँगै रहन सक्दैनन्। पिउने र नपिउने बीच ताल र सुर मिल्दैन भनिन्छ। पिउनेलाई रात बितेको पत्तो हुँदैन भने नपिउनेलाई उत्तिकै छटपटी। तर, अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका निलम्बित अध्यक्ष एवं मनोनित संविधानसभा सदस्य गणेश थापामा अद्भुत क्षमता छ। उनी आफू मदिरा पिउँदैनन् तर मदिरा पिउनेसँग छर्लङ्ग रात बिताउन सक्छन्।
यस्ता रातहरुमा कतिपयले उनलाई छल्न खोज्छन् तर सफल हुँदैनन्। यसरी दरुवासँग रात बिताउनुमा उनको गजबको स्वार्थ छ। सुरुमा आफ्नो बखान गर्ने, त्यसमा अरुको 'हो हो' सुन्ने। जब दरुवा नशामा डुब्दै जान्छ अनि आफ्नो बारे उसका भित्री धारणा बुझ्ने। त्यही बेला आफ्ना विरोधीहरुको योजना पनि फुत्क्याउने।
समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर गणेश थापाका साला मणि कुँवरले खेल पत्रकार दिनेशजङ्ग शाहलाई दशरथ रंगशालामा नै हातपात गरे। त्यस घटनाको विरोध र मिलाउने जिम्मा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले लियो। लैनचौरको मल्ल होटलमा खेल पत्रकार र गणेश थापाबीच वार्ता भयो। त्यहीँ पहिलोपटक मैले आफूलाई वरिष्ठ खेलकुद पत्रकार ठान्नेहरु गणेश थापाको अगाडि कसरी नतमस्तक हुन्छन् भन्ने देखेँ। प्रहरी महानिरीक्षकका अगाडि सिपाही र गणेश थापाको सामुन्ने वरिष्ठ खेल पत्रकारको हैसियत उस्तै हुने रहेछ।
वार्ताका क्रममा अजय फुयाँलबाहेक अरुले तर्कसहित अडान राखेको मलाई हेक्का छैन। तत्कालीन समयका वरिष्ठ भनाउँदा खेल पत्रकारलाई त उनले झाँको नै झार्दा रहेछन्। त्यो घटनापछि मैले अठोट गरेँ- गणेश थापा सँग न टाढा न नजिक, मात्र समदुरी कायम गर्ने।
दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता पाएपछि एन्फामा पुन: विद्रोह भएको थियो। थापाले एकलौटी एन्फा चलाएको, आर्थिक अनियमितता भएकोजस्ता आरोपसहित रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटीका अध्यक्ष विजयनारायण मानन्धरको नेतृत्वमा सहिद स्मारक लिग खेल्ने क्लब आन्दोलनमा होमिए। अहिले गणेश थापाको हितैसी देखिएका एन्फाका सिइओ इन्द्रमान तुलाधर पनि आन्दोलनकै मोर्चामा थिए।
नक्सालमा एकजना फुटबलरको बिहे भोज थियो। फुटबलका पदाधिकारी एक अर्कामा लगभग बोलचाल नै बन्दको अवस्था थियो। उनीहरु दुई समूहमा बसेका थिए। त्यस्तोमा हामीजस्तालाई धर्मसंकट। केही खेल पत्रकारबीच निधो भयो हामी कुनै समूहतर्फ पनि नजाने। छुटटै बस्ने। तर गणेश थापालाई छल्न के सकिन्थ्यो। उनी कुर्ची तान्दै आइपुगे। हामी उठेर हिँड्न पनि सक्ने अवस्थामा थिएनौं। त्यसै त उनको कित्तामा हामी विद्रोही पत्रकार। उनको गफ नचाहँदा नचाहँदै पनि सुन्न बाध्य भयौं। प्रसंग फुटबल आन्दोलनकै थियो। 'नेपालमा सात सय क्लब छन्। सात क्लबले भन्दैमा म किन राजीनामा दिन्छु ?' उनले सुनाएका थिए।
शत्रु र आगोलाई कहिल्यै सानो ठान्ने भूल गर्नुहुँदैन। त्यसलाई उनले वास्ता गरेनन्। उनको एकोहोरो प्रवचन चलेकै थियो। प्रतिवाद गर्न आवश्यक ठानिएन। अरुको बिहे भोजमा विवाद गर्नु उचित पनि थिएन। उनी प्रवचन दिँदै दिए।
एन्फामा उनलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने बताउँदै थिए- 'नेपालमा कसलाई कसरी ठेगान लगाउनुपर्छ मलाई पनि थाहा छ। जो-जो मेरो विरोधमा छन् तिनका नेताले मलाई आशिर्वाद दिएका छन्। मैले नचाहेरमात्र हो। चाहने हो भने म उनीहरुकै पार्टीबाट सांसद बनेर देखाइदिन सक्छु।'
हुन पनि नेपालमा पैसा हुने हो भने सभासद हुन गाह्रो नरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ। गीता राणा र बाबुराम पोखरेलको मधेस आन्दोलनसँग र उमेश श्रेष्ठको कांग्रेससँग के सम्बन्ध? तर, उनीहरु सभासद भए त। राप्रपा नेपाल त गणेश थापाको दाइको पार्टी ! उनलाई सभासद हुन के गाह्रो। भलै नौ वर्षअघि उनले भने जस्तो विद्रोहीहरुको पार्टीबाट चै सभासद भएनन्।
भारतको गोवामा दोस्रो साफ च्याम्पियनसिप भएको थियो। नेपाली टोली व्यवस्थापकमा थिए ललितकृष्ण श्रेष्ठ। त्यहाँ खेलाडीलाई स्याउ किन्नु पर्ने भएछ। खेलाडीले केही महङ्गो स्याउ छानेछन्। ललितकृष्ण सस्तो किन्नेमा थिए। खेलाडीले नमानेपछि उनले नेपालमा गणेश थापालाई फोन गरे - कुन स्याउ किन्ने भनेर।
सन् २००५ मा पाकिस्तानको कराँचीमा साफ च्याम्पियनसिपको अर्को संस्करण भयो। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक जापानी तोसिहिको सिओजावा थिए। सन्यास लिइसकेका उपेन्द्रमान सिंहलाई फिर्ता बोलाएर पनि बेञ्चमा राखिएको थियो। विकास मल्लले डेब्यू गरेको प्रतियोगिता। हामी ६ जना पत्रकार प्यारापिटमा थियौं। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको अध्यक्षसमेत रहेका गणेश थापा भिआइपी सिट छाडेर हामी भएकै ठाँउमा आएका थिए। खेलका दौरान उनी पटकपटक फोनमा व्यस्त हुन्थे। उनको फोन अरुलाई नभएर बेञ्चमा रहेका टिम व्यवस्थापक ललितकृष्ण श्रेष्ठलाई हुन्थ्यो।
'यो खेलाडी निकाल, यो पठा।' उता ललितको जवाफ आउँथ्यो 'दाइ यो कोच मान्दै मान्दैन। तेरो अध्यक्षलाई नै यहाँ आइज भन, म जान्छु भन्छ,' भन्थे।
मध्यान्तरपछि प्रशिक्षक पनि गले। थापाले फोनमा जसलाई निकाल भन्थे त्यो कार्यान्वयन हुन्थ्यो। कहिलेकाँही गणेश थापा प्यारापिटबाटै चिच्याउँदा वरपरका सबै हामीतिरै हेर्थे।
नेपाल, भारत र बंगलादेशसँग हारेपछि थापा काठमाडौं फर्किए। भुटानसँगको खेल मन लागी नलागी हेर्दै थियौं। नेपालले भुटानसँग तीन गोलको अग्रता लिइसकेको थियो। एक पत्रकारले गणेश थापाको बोली ठ्याक्कै नक्कल गरे। उनले ललितलाई फोन गरे। नभन्दै खेलाडी त परिवर्तन ! पछि ललित भन्दै थिए - नेपालमा लाइभ हेरेर फोन गरेको जस्तो लाग्यो।
यी त प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् - २० वर्षसम्म गणेश थापाले नेपाली फुटबल कसरी चलाएका थिए भन्ने। हुन पनि यो बीचमा जसले फुटबलमा सुशासनको आवाज उठायो, ऊ विस्थापित नै भयो। खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक, पदाधिकारी र पत्रकार पनि। गणेश थापाको आदेशबिना फुटबलमा पात हल्लनेवाला थिएन।
परिस्थिति अनुसार आफूलाई बदल्न सिपालु थापाले प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र र अहिलेको गणतन्त्रमा पनि सबैलाई आफू अनुकुल माहौल बनाउन सफल भए। त्यसो त गणेश थापा आफ्नै विवेकले मात्र त्यो क्षमतामा पुगेका होइनन्। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी कमल थापाको भाइ भएकाले गणेश थापालाई धेरै नै टेवा पुगेको हो।
कमल आफै राष्ट्रिय फुटबल टिमको पूर्व कप्तान। शरदचन्द्र शाह सदस्य सचिव हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य थिए कमल थापा। त्यसमा पनि एक दशकभन्दा बढी फुटबल संघको अध्यक्ष भएर अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका। नेपाली खेलकुदको छिद्रछिद्र उनलाई थाहा हुने नै भयो। उनको मूलधारको राजनीतिको त कुरै गर्नपरेन।
नेकपा एमालेका केशव स्थापित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भएको समयमा एन्फा अध्यक्षमा मनोनित भएका हुन गणेश थापा। त्यसपछिका हरेक वाद, र व्यवस्थालाई आफू अनुकुल प्रयोग गरे उनले। कतिपय अवस्थामा दाइको लाइनबाट र कतिपय अवस्थामा आर्थिक लाइनबाट। धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र भन्ने नेपाली उखान छ। त्यसलाई गणेश थापाले प्रयोगमा ल्याए। सदस्य सचिव, खेलकुद मन्त्री पार्टीका नेता सबैलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरे।
गणेश थापा यस्ता व्यक्ति हुन्, जसको नाममा तीन तीन वटा आयोग खडा भए। ती सबै आयोगले गणेश थापालाई दोषी देखायो। तर, कारवाही भएन। यतिसम्म कि निराला आयोगको रिपोर्ट त गायबै बनाइयो।
२० वर्षअघि र अहिलेको गणेश थापाको आर्थिक हैसियतमा कायापलट छ। वैधानिक रुपमा कुनै व्यापार व्यवसाय छैन उनको। तर, पनि करोडौं सम्पति जोडेका छन्। काठमाडौंमा आलिशान जीवन छ - घरानियाँ व्यापारीको जस्तै। तर, उनको सम्पतिको स्रोत के हो भन्ने खोजी कुनै निकायबाट भएन। थाहा पाएर पनि नपाए जस्तै।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको निर्वाचनमा भोट खरिदबिक्री प्रकरणलाई लिएर एक लाख अमेरिकी डलर गणेश थापाको छोरा गौरवको बैंक खातामा जम्मा भएको समाचार आयो। फेरि पनि गणेश थापाकै कुरा ठूला।
पछिल्लो समयमा एन्फाकै उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ्ग शेर्पा, विजयनारायण मानन्धर, किशोर राई, पंकज नेम्वाङसहितको टोली एन्फा शुद्धिकरणको आन्दोलनमा जुटेको छ। त्यसपछि भने थापा केही अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
हुन त सुरुमा उनले आफूलाई चलाए नेपाली फुटबललाई नै प्रतिबन्ध लाग्ने चेतावनी दिएका थिए। भलै अहिले उनी निलम्बनको अवस्थामा छन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ५८ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। तर, सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा - एन्फा भ्रष्टाचारमा अख्तियारले अहिलेसम्म मौनता साँधेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा फटाफट काम अगाडि बढाएको अख्तियार एन्फा भ्रष्टाचार मामिलामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिसपछि पनि कछुवाकै गतिमा छ।
गौरव थापाको खातामा एक लाख डलर सम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्ने भन्ने समाचार गोरखापत्र दैनिकले पहिलो पेजमै थापेको थियो। यो समयमा समाचार रोक्ने गणेश थापाको अथक प्रयास रह्यो। अरु केही मिडिया हाउसले एक लाख डलर काण्डबारे समाचार फलो गरेका थिए। सोही क्रममा गोरखापत्रको समाचार हावादारी भएको गणेश थापाको भनाइ थियो।
गोरखापत्रको समाचारलाई अख्तियारले देखेन। सरकारी मिडियाको समाचार फिक्का बन्न पुग्यो। त्यतिखेर अख्तियार कर्मचारीबाट चलेको थियो। सचिव प्रमुख थिए। अहिले अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की प्रमुख छन्। लोकमानको पृष्ठभूमि र कमल थापाको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे सबै जानकार नै छन्। के अहिले त्यही सम्बन्धको 'कार्ड' एन्फा भष्ट्राचारको छानबिन ढिलासुस्तीको कारण बनेको हो ?
सुरुमा गणेश थापालाई चलाउँदा नेपाली फुटबल प्रतिबन्धमा पर्छ भन्ने भ्रम धेरैलाई थियो। तर फिफा र एएफसीले अहिले गणेश थापालाई नै निलम्बनमा राखेर आर्थिक अनियमिताको बारेमा छानबिन गरिरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमको "कार्ड" पनि सकिसकेको छ। गणेश थापा सम्पत्ति शुद्धिकरण, विदेशी मुद्रा अपचलन, अदृश्य व्यवसाय सबै क्षेत्रमा छानबिनको दायरामा पर्ने व्यक्ति हुन्।
विदेशमा सामान्य मजदुरी गरेको व्यक्तिले नेपालमा पैसा पठाउँदा वा आफैले डलर लैजाँदा निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छुट गणेश थापाले पाउँदै आएका छन्। ५ हजार रुपैयाँ घुस खाएको व्यक्तिलाई रंङ्गेहात पक्राउ गरिएको भनेर सगर्व सार्वजनिक गर्ने अख्तियार एन्फाको ५८ करोड काण्डमा लगभग मौन रहँदै आएको छ। यो मौनता कहिलेसम्म रहने हो ?
(कान्तिपुर टेलिभिजनमा खेल पत्रकारिता गरेका लेखक हाल न्युयोर्कमा छन्।)